Car Lock, Suppliers, Auto Stickers, Locksmith Tool - Locksmithobd
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်!
Locksmithobd ကုမ္ပဏီသည်ရှန်ကျန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး adrees သည်ရှန်ကျန်း Longhua ခရိုင်၊ Long Hua လမ်း၊ Tianhui အဆောက်အ ဦး၊ C-512 တွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားသော့နှင့်သော့ခတ်ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ရေးအထူးပြုသည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ LISHI, GOSO, ရိုးသား, KLOM.HUK ၏အေးဂျင့်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိစစ်မှန်သောနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးယာဉ်အဝေးထိန်းနှင့် transponder သော့များကိုဖြန့်ဖြူးသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သော့ခလောက်လုပ်ငန်းများကိုယာဉ်များသော့များကိုလွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်သူများ၊ လက်ကားရောင်းသူများနှင့်အခြားဖြန့်ချိသူများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုများကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးသည်။
KEYDIY ZB စီးရီး ZB14-5 ခလုတ်တစ်ခုလုံးအဝေးထိန်း ...
KEYDIY ZB စီးရီး ZB11 ခလုတ်တစ်ခုလုံးအဝေးထိန်းခ ...
KEYDIY ZB စီးရီး ZB10-4 ခလုတ်တစ်ခုလုံး ...
KEYDIY ZB စီးရီး ZB10-3 ခလုတ်တစ်ခုလုံး ...
KEYDIY ZB စီးရီး ZB08-3 ခလုတ်တစ်ခုလုံး ...
၀ န်ဆောင်မှုအချိန် - သင့်အလုပ်ချိန် (တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့) တွင်သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးသည့်နောက် ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ပါမည်။ အရည်အသွေး - အရည်အသွေးပြproblemနာကို ၇ ရက်အတွင်းပြန်ရောက်နိုင်လျှင်။ အာမခံ:2နှစ်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်အာမခံ။
ထုတ်ကုန်များ - Locksmith ကိရိယာများနှင့် Car key remote, programmer, OBD tools များ။ ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန် - ၃ ရက်အတွင်းပေးပို့နိုင်သည်။ အထုပ်: OEM / ODM ဖြစ်နိုင်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုအထုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်သူ - Locksmithobd စက်ရုံသည် Zhejiang Province တွင်တည်ရှိသည်။ Zhejiang နှင့် Shenzhen တွင်ရုံးခန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့် Aisa သို့အမြဲတမ်းတင်ပို့ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များနှင့်အကြံဥာဏ်ကောင်းများစွာရှိသည်။
တစ်ခု 9in1 အလိုအလျောက်သော့ခတ်ပါ ...
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေသော T ...
1. အဆစ်ချောမွေ့ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ Dur ...